Htet Htet Moe Oo's Lovely Family Life | Myanmar Celebrity Couple Photos
Htet Htet Moe Oo's Lovely Family Life
Here are happy family photos of Myanmar former famous actor Htet Htet Moe Oo. Htet Htet is havingawarm family life with her only one daughter, " Sit Lon Wadi Htet", and her husband "Zuu Myat Htet". ထက်ထက်မိုးဦး ရဲ့ မိသားစု ပုံရိပ်
Zuu Myat Htet, Sit Lon Wadi Htet and Htet Htet Moe Oo ADVERTISEMENT
zawmyoFebruary 9, 2012 at 12:53 PMကလေးကချစ်စရာလေးပဲ အမေတူလေးပါ........ReplyDeletenainaiFebruary 9, 2012 at 6:26 PMကလေးကအရမ်းချစ်စရာလေးပဲ မထက်ထက်မိသားစုလေးကြည့်ရတာဝမ်းသာလှပါတယ် သက်ထက်ဆုံးပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေဗျာ။ReplyDeleteburmaFebruary 10, 2012 at 12:39 PMThe baby is so cute. Whatalovely family:)ReplyDeleteအနာဂါတ်လူငယ်February 11, 2012 at 2:04 AMသူတို့ ဘ၀လေးသာယာဖြောင့် ဖြူးနိုင်ပါစေဗျာReplyDeletenanFebruary 13, 2012 at 6:27 PMso cuteReplyDeleteburmaFebruary 22, 2012 at 10:42 PMThe baby is so so cute. I wanna kiss her. So adorable:)ReplyDeleteelvira.soeFebruary 25, 2012 at 4:08 AMအမထက်မိသားစုကိုအရမ်းချစ်တယ်။ReplyDeleteelvira.soeFebruary 25, 2012 at 4:17 AMအမထက်ကိုငယ်ငယ်လေးကတဲ့ကအရမ်းချစ်ခဲ့တာ။ သူစိတ်ချမ်းသာပါစေလို့အမြဲဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။ သူ့အိမ်ထောင်ရေးမှာအခုလိုပျော်နေတာမြင်တော့ အကိုဇူးမြတ်ထက်ကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ် ။ အမထက်ကိုအမြဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးပါနော်။ ကလေးလေးကိုလဲအရမ်းချစ်တယ်။ReplyDeletesulatmonFebruary 25, 2012 at 10:52 PMကလေးလေးကလည်းအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အမေကောအဖေကောနှစ်ဥိးလုံးချောကြပါတယ်သက်ဆုံးတိုင်ပေါင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ReplyDeletekissMarch 5, 2012 at 11:59 PMwowww so cute baby lay...wanna kiss u baby lay..<3<3ReplyDeletesu myoApril 21, 2012 at 10:43 PMHi Ma Htet my family like you always .You baby also very cute and beauty same like father and mother .I hope your are happy family.Cheer Ma Htet can you get good luck and happy family type.Hi Ko Zu you take care for baby and you wife .Thank.........I love you always Ma htet ................ReplyDeleteမေဒီဇင်ဘာMay 21, 2012 at 6:32 AMမထက် ကို အရမ်းချစ်တယ် သမီးလေးကလည်းချစ်စရာလေး ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘ၀ကို အသက်ထက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေReplyDeletewisdomMay 25, 2012 at 10:28 PMမထက်ကိုအမြဲအားပေးနေပါတယ်.ReplyDeletehenry ayekoJune 4, 2012 at 2:04 AMကလေးက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲReplyDeletesansanJuly 30, 2012 at 10:13 PMမထက်ကို ချစ်ချစ်ယိုစုံ ကြော်ငြာကတည်းကကြိုနှစ်သက်ခဲ့တာ အခုချိန်ထိပဲ အားပေနေတယ်ပျော်ရွှပါစေReplyDeletechouAugust 2, 2012 at 3:14 PMမထက် - your baby is very cute. please don't teach her how to hit journalist.ReplyDeleteNANN THIN ZAR HLAINGAugust 4, 2012 at 5:15 AMမထက် တို့ မိသားစု အမြဲပျော်ရွှင် ပါစေReplyDeleteTayokema Nyi Ma LayAugust 30, 2012 at 7:52 PMတော်တော်လေးဝနေ ပါလားReplyDeletedardarSeptember 24, 2012 at 2:49 AMမထက် တို့ မိသားစု အမြဲပျော်ရွှင် ပါစေReplyDeleteyannaung tunNovember 8, 2012 at 11:06 PMသမီးလေးက အရမ်းလှတာပဲ။ ချစ်ဖို့အရမ်းကောင်းတယ်၊နှုတ်ခမ်းလေးက သူ့အဖေနဲ့တူတယ်.မျက်လုံးလေးက ထက်ထက်နဲတူတယ် မျက်လုံးကအရမ်းလှတယ်ReplyDeletewint war khaingFebruary 6, 2013 at 6:28 AMမထက်တို့မိသားစုပျော်ရွှင်ပါစေReplyDeletewint war khaingFebruary 6, 2013 at 6:30 AMမထက်တို့မိသားစုပျော်ရွှင်ပါစေReplyDeletechit PoMay 7, 2013 at 1:04 AMvery very lovely family ! Wish u best of luck!ReplyDeleteAnonymousSeptember 14, 2013 at 10:27 PMVery Happy family.............ReplyDeleteAdd commentLoad more...